Chii chinonzi Clonezilla? Shamwari yako pakatarisana nenjodzi | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Resources, Linux software
Clonezilla ndeyemahara cloning software yemadhisiki akazara kana zvikamu. Ndokusaka inogona kukusevha kubva kunjodzi yakanaka, ichikubvumidza iwe kuve negadziriro yegadziriro yesystem yako kana dhata pasina kukanganiswa nekutadza kwemuviri weyako yekuchengetera Hardware kana nechero rimwe dambudziko re software, senge rudzikunuro runonyora zvirimo dhisiki rako uye unofanira kubhadhara rudzikunuro kana uchida kuridzorera.
Kuva ne backup kunogara kuchikurudzirwa, kunyanya kana iwe uine data rakakosha kana vatengi mune yekuve kambani. Iye zvino tava kuona yakawanda uye yakawanda rudzikunuro inosvika nenzira dzakasiyana, senge mumaemail anopokana ayo anofungidzirwa kuti anobva kuCorreos, kana Endesa, nezvimwe. Zvakare, mamwe acho anokanganisa masisitimu anoshanda eGNU / Linux, saka hatisi kunyatso chengeteka. NaClonezilla unogona kudzikama kana uchiita backup yakakwana.
Iwe unofanirwa kuziva kuti iyo yakasikwa naSteven Shaiu uye yakagadzirwa neNCHC Labs yeTaiwan. Inopihwa mumhando dzakasiyana, senge Clonezilla Server Edition (pamusoro penetiweki), iyo inopa multicast rutsigiro rweanopfuura makumi mana emakomputa panguva imwe chete uye aine maficha anogona kukuyeuchidza nezve yakakurumbira proprietary uye yakabhadharwa software Norton Ghosth Corporate Edition, iyo inoshanda zvakafanana basa saClonezilla. Clonezilla Server kana SE inozadzisa iri basa nekuda kweDRBL (Diskless Remote Boot muLinux) maseva nenzvimbo dzekushandira dzakabatana nenetiweki.
Imwe vhezheni ndeye Clonezilla Live (CD kana USB Live), iyo inobvumidza kusanganisa vashandisi vane imwe michina, uye nekudaro inonyanya kubatsira kune vazhinji vedu. Muzviitiko zvese izvi zvinobvumidzwa kuchengetedza iyo cloning mune yefaira faira kana sekopi chaiyo yedata. Iwe unogona zvakare kusarudza kana iwe ukavachengeta munharaunda (pane yako hard drive kana pendrive) kana kana vachizviita pane server kuburikidza neSSH kubatana, chero Samba kana faira server rauinaro, nezvimwe. Ehezve, pese paunoda iwe unogona kudzoreredza idzi backup mapoinzi
Tanga naClonezilla izvozvi!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Chii chinonzi Clonezilla? Shamwari yako pakatarisana nenjodzi
Aethercast pane Ubuntu Kubata, nhanho nyowani yakanangana nekubatana